I-Apple ikhupha iBeta 2 ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 yaBaphuhlisi | Ndisuka mac
NguMvulo kwaye iApple isandula ukwazisa I-beta 2 ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 kunye nalo utshintsho oluthile kuzinzo nakukhuseleko lwenkqubo. Ngokucacileyo kwaye njengoko kusenzeka kuzo zonke iinguqulelo ze-beta eziqaliswa ngu-Apple kubaphuhlisi, asiwafumani amanqaku achaza iindaba ezongezwe kuyo, kodwa yonke into ibonisa ukuba asijonganga nohlobo olunotshintsho oluninzi.
Kwaye xa sisitsho asithethi ukuba utshintsho okanye ukuphucula akubalulekanga Kwezi nguqulelo, asijonganga nohlobo olongeza amanqaku amatsha kwinto ebonakalayo okanye ekusebenzeni.
I-Apple inesingqisho esihle seinguqulelo ze-beta kuzo zonke iinkqubo ezisebenzayo kwaye ngale ndlela sinokuthi uphuculo kulindeleke ukuba lufike ngakumbi Abasebenzisi be-iOS, ababona ukuba ibhetri ye-iPhone okanye i-iPad yabo iyintloko yokwenyani.
Ekugqibeleni into abazama ukuyenza ukusuka eCupertino kukuphuculwa koku kwaye yiyo loo nto iinguqulelo ze-beta zikhona. Inyani yile yokuba kuthi, iMacOS ePhakamileyo yeSierra inengxaki enkulu kubasebenzisi abathile kunye nefowuni yokufaka, Ndiyathemba ukuba oku kuyakulungiswa kungekudala ngohlobo olusemthethweni lweMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1. Okwangoku akukho mhla ubekiweyo wosungulo olusemthethweni kwaye ukuba kuya kufuneka silandele ipateni yeenguqulelo zamva nje ze-beta ezikhutshwe yi-Apple isenokuba lixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » I-Apple ikhupha iMacOS ePhakamileyo yeSierra 2 beta 10.13.1 yabaphuhlisi
Uyigcina njani i-URL kwi-Mac's Dock